ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်တည်းက သေခြင်းတရားနဲ့ ပက်သက်ပြီး သင်ပေးဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ? - Lifestyle Myanmar
ဒီနေ့ပြောပြချင်တာက ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ရွယ်တည်းက သေခြင်းတရားနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာတွေ သင်ပေးသင့်လဲ ဘယ်လိုစပြောသင့်လဲ ဘယ်လိုပြောပြကြမလဲဆိုတာပဲ။ သေတာနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာကြောင့်ပြောပြသင့်လဲဆိုတော့ ရုတ်ရရက်ဆုံးရှုံးရမှုတွေကို ရင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကျော်ဖြတ်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
သေခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာသာအယူဝဒ အမျိုးမျိုးအရ အတွေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာအရကိုယ်တတ်နိုင်တာ သင်ပေးလို့ရပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ သေခြင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ.သူ့ကိုထပ်မတွေ့ရတော့မှာဆိုတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောပြနိုင်ပါတယ််။ အရမ်းနက်နဲတာတွေကိုတော့ အရမ်းငယ်တဲ့အချိန်မှာ မပြောပါနဲ့ဦးနော်..
ကလေးတွေမေးမြန်းတတ်တဲ့အရွယ်ရောက်လာရင် မေးးခွန်းလေးတွေ မေးတတ်လာပါပြီ။ သူတို့မျက်စိရှေ့မှာ မြင်တာ ကြားတာတွေဆို သူတို့မေးတတ်နေပါပြီ။ ကလေးတွေကိုဘာကြောင့်သေခြင်းကို မိတ်ဆက်ထားပေးသင့်လဲဆိုတော့ ရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးမုတွေဖြစ်လာရင်ခံစားနိင်အောင် ကျော်ဖြတ်နိုင်စေဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိသားစုတစ်စုမှာ မအေ ရော၊ ဖအေရောကို ရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးသွားလို့ ဖောက်ပြန်ရူးသွပ်သွားပြီး သူပါလိုက်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီး ရှိနေလို့ပါ။ ဒါကြောင့် သေတယ်ဆိုတာနဲ့ပက်သက်ပြီး လူတိုင်းသေကြရမှာဖြစ်ကြောင်း ကလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးထားပါ။
စာအုပ်တွေ ပုံပြင်တွေ ဖတ်ခိုင်းပါ
တချို့မိသားစုတွေဆိုအစွဲကြီးကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို အရမ်းချစ်လို့ မကောင်းတာတွေနဲ့ပက်သက်တာဆို မသိစေချင် မကြားစေချင်ကြတာမျိုးပေါ့၊ နောက်ပိုင်းဆိုကလေးကလူ့လောကအကြောင်း ဘာမှမသိပဲ မရင့်ကျက်သူတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းသွားနိုငိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုငယ်ငယ်တည်းက သေခြင်းအကြောင်း ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေ ပုံပြင်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားပါ.
ဒါမှ လောကကြီးထဲမှာ ရင့်ကျက်စွာနေထိုင်ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာပါ..ကဲဒီလောက်ဆို ကလေးတွေကို သေခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး ဘာကြောင့်သင်ပေ’သင့်လဲဆိုတာ သိလောက်ပီထင်ပါတယ်နော်.
သင့်ရဲ့ မွေးရက်အရ အံ့ဩဖွယ်သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ
1, 10, 19 , 28 ; သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားလာတယ် ဘယ်လိုမွေးလမှာမဆို သင့်ရဲ့ မွေးရက်တွေက ဒီလိုနေ့ရက်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မွေးဖွားလာတာပါ။ ပိုကောင်းလာစေဖို့ပေါ့။2, 11,...
မိသားစုအတွင်း သိုးမည်းလေးဖြစ်နေရင် ဘယ်လိုရပ်တည်ရှင်သန်မလဲ
သိုးမည်းဆိုတာကို ဘာကိုဆိုလိုသလဲ မိသားစုအတွင်းသိုးမည်းဆိုတာက တစ်ခြားမိသားစုဝင်တွေနဲ့မတူဘဲ တစ်မူထူးခြားပြီး မိသားစုရဲ့ စံနှုန်းတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တဲ့သူကို ဆိုလိုပါတယ်။ မိသားစုရဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ စံချိန်စံနှုန်းတွေကို မလိုက်နာနိုင်ဘဲ အဆိုးဆုံးမိသားစုဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ နာမည်ဆိုးနဲ့ ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသူဖြစ်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ဆုံံးဖြတ်ချက်တွေ...